Hivoaka ny Kianja i Magro rahampitso - rov@higa
Hivoaka ny Kianja i Magro rahampitso
9 Septembre 2011, 23:18pm
Fotoana iray iantsoana ny firaisan-kinan’ny mpitolona rehetra rahampitso Sabotsy 10 Septambra 2011. Araky ny vaovao marim-pototra azo manko dia manely tsaho any amin’ny TROIKA ny FATE fa efa avela malalaka maneho hevitra ny mpandala ny ara-dalàna saingy “tsy sahy mivoaka an’ny Magro”. Mbola milaza ihany koa izy ireo fa efa mametraka ny fahatoniana ara-politika ary tanisainy ho porofon’izany ny fanafahana madiodio ireo mpikambana Tokobey Telo sy ireo mpikatroka ao amin’ny Ankolafy telo izay voarohirohy tamin’ny fandorana ny Radio Soatalily tany Toliara.
Nanapa-kevitra ary ny mpitari-tolona fa hivoaka ny Kianjan’ny Finoana rahampitso ahitana izay mety ho fihetsiky ny FATE manoloana izany. Tanjona ny azahoana ny Kianjan’Ambohijatovo ka raha mandaroka ny hery famoretana dia ho fantatr’izao tontolo izao fa fafilainga no nataon’ny mpanongam-panjakana. Raha mamela ny vahoaka haneho hevitra am-pilaminana kosa dia hifindra ao amin’ny Kianjan’Ambohijatovo amin’izay ny hetsika rehetra manomboka rahampitso.
Te-hanao tsy maty manota ny FATE
Fialana bala avokoa no mahatonga ny FATE hanely izany lainga marivo tototra any amin’ny Fianakaviam-be irasaim-pirenna izany. Maro loatra mantsy ny fahotana vitan’izy ireo ka miezaka mafy ny hamafa izany izy ireo amin’izao am-pototry ny fahareseny izao. Tsara anefa ny mampahatsiahy fa ny fifanarahana politika izay entina mamahana izao krizy izao dia tsy manadio velively ny hadisoana nataon’I TGV sy ny forongony nanomboka tamin’ny 2009 no mankaty.